Google က Chat ကိုအောက်ခြေ - သင်၏ PPC ချက်တင်အပေါ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်!
Google Ads ၊ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကြော်ငြာများနှင့် Facebook ကြော်ငြာများအတွက် Google Chat Bot
သင့်ရဲ့ PPC အကောင့်အသစ်များ၏ '' စွမ်းဆောင်ရည်မက်ထရစ် & ဂရပ်များအဘို့သင့် bot မေးပါ
Google Ads နှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကြော်ငြာမဟာဗျူဟာကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရန်အကြံပေးချက်များကိုသင့် bot အားတောင်းပါ
Google က Chat ကိုပေါင်းထည့်ရန်
မျက်စိကိုစောင့်ရှောက်ရန်တစ်ခုမှာလျော့နည်း tab ကို။ Ads မက်ထရစ်များကိုသာကြည့်ခြင်းဖြင့်အချိန်ကိုသက်သာပါ။
ဤသည်က Google Chat ကို bot သင်သည်မက်ထရစ်, ဂရပ်များ, နှင့် Google Chat ကိုအပေါ်ကိုတိုက်ရိုက်ပင်အနှစ်ချုပ်များနှင့်သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးရဲ့တိုးတက်မှုကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
စျေးကွက်အပေါ်အလားတူ tools များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, ဒီ tool ကိုတစ်ဦး Dime ဆပ်ဖို့သငျသညျမလိုအပ်ပါဘူး။
filter Facebook က Ads , Google Ads Microsoft က Ads သင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်မှာတစေ့တစောင်းရ။
သင်၏ကိုယ်ပိုင် dashboard ကိုသုံးပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ သင်မြင်ချင်တဲ့မက်ထရစ်ကိုသာကြည့်ပါ။ Schedule your reports and configure your customized alerts ။
အဘယ်ကြောင့် Clever Ads Google Chat Bot ကိုတပ်ရမည်နည်း။
မက်ထရစ် & graph
Google Ads ၊ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကြော်ငြာနှင့် Facebook ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဂရပ်များနှင့်မက်ထရစ်များ။ ဂူဂဲလ်ချက်တင်မှတဆင့်ထင်မြင်ချက်များ၊ ပြောင်းလဲမှုများ၊ ကလစ်များကိုနားလည်ခြင်း။
အဆိုပါဒိုင်ခွက်တွင်, သင်သည်သင်၏ထုံးစံ set ကိုတံခါးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းတစ်ချိန်က Google ၏ Chat ကိုကနေတဆင့်အကြောင်းကြားဖို့သင့်ကိုယ်ပိုင်သတိပေးချက်များကို configure နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်နှစ်သက်တဲ့ channel မှာမက်ထရစ်အပေါ်နေ့စဉ် / အပတ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်ရယူပါ။ ဖိုင်ပေါ်တွင်သူတို့ကိုစောင့်နှင့်သင့်အဖွဲ့သည်သူတို့နှင့်အတူမျှဝေပါ။
သိကောင်းစရာများ: မကြာမီ comming
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစာတိုပေးပို့ခြင်းသည်သင်၏ Facebook သို့မဟုတ် Google Ads နည်းဗျူဟာနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သင်၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောမည်သည့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအမျိုးအစား၊
မိနစ်ပိုင်းအတွင်းတွင် Clever Ads Google Chat Bot ထည့်နိုင်သည်
အဆိုပါ bot Install
Clever Ads bot ကို Add to Google Chat သို့နှိပ်ပါ။
သင်၏ Google, Microsoft နှင့် / သို့မဟုတ် Facebook Account အား အသုံးပြု. အတွက် log သင့်ရဲ့ကြော်ငြာအကောင့်ဆက်စပ်။
အချိန်ဇယားအစီရင်ခံစာများ, Configure သတိပေးချက်များ, မိမိ bot configure, etc မှသင့်ဒက်ရှ်ဘုတ် access
Google က Chat ကိုမှ Go ကိုအပေါငျးတို့သညျကြှနျုပျတို့၏ bot သင်သည်ပူဇော်နိုင်ပါတယ် features ကိုစတင်သုံးစွဲ!
ဒီ bot အတိအကျအဘယ်သို့ပြုရပါသနည်း?
ဤအက်ပလီကေးရှင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော“ နံနက်ခင်းကော်ဖီသောက်ရန်သင့်အားအချိန်အလုံအလောက်သက်သာစေလိုသည်” ဖြစ်သည်။ Google Ads account ကိုချိတ်ဆက်ပြီးပါကမက်ထရစ်နှင့်ဂရပ်များကိုသင်၏ Slack , Microsoft Teams သို့မဟုတ် Google chat ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်စာပို့ခြင်းဖြင့်ရိုးရှင်းစွာ bot ကိုစာပို့ခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်သည်။ Google Ads interface ကိုနေ့တိုင်းဝင်ရောက်စရာမလိုသည့်အတွက်သင်၏အဖိုးတန်အချိန်ကိုချွေတာသည်။
သတိပေးချက်များ - သင်၏ကြော်ငြာအကောင့်များနှင့်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိပါ။ Clever Ads 'bot သည်သင်၏သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများကိုပြည့်မီပါကသင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
Google Ads အကောင့်ကိုဘာကြောင့်ချိတ်ဆက်ရမှာလဲ။
Google Ads အကောင့်ကိုလုံခြုံစွာလုံခြုံစွာထားနိုင်ပါသလား။
ဒါဟာ 100% လုံခြုံပါတယ်! Clever Ads သည်ဂူဂဲလ်ပါတနာပါတနာဖြစ်သည်။ ဤခေါင်းစဉ်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်၏အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းများနှင့်စံနှုန်းများကိုပြည့်မီရမည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်ငါတို့တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့်အမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၁၅၀,၀၀၀ ကြားတွင်နာမည်ကောင်းရခဲ့သည်။
သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်သို့ဆိုင်းအင်ဝင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့၏စာဝှက်ထားသောဒေတာဘေ့စ်ထဲ၌ဝင်ရောက်ခွင့်အမှတ်အသားကိုကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းထားသည်။ Clever PPC API မှသာအသုံးပြုသည်၊ Slack Microsoft Teams သို့မဟုတ် Google Chat နှင့်မျှဝေမည်မဟုတ်။ Google Ads ကြော်ငြာမှသက်ဆိုင်ရာဒေတာများကိုရရှိသောအခါ၎င်းကို Slack သို့မဟုတ် Microsoft Teams မက်ဆေ့ခ်ျအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ သင်ကသင်ရိုက်ထည့်လိုက်သောစကားဝိုင်းအတိုင်းပြန်ပို့သည်။